Celebrities' News Archives ⋆ Page6of 382 ⋆ Popular
တေးရေးဆရာ ကြီးတွေလိုတော့ စကားလုံး ကြွယ် ကြွယ် ၀၀တော့မရေးနိုင်ဘူးပေါ့ လေ။ ကိုယ်ရှိသလောက် ၀မ်းစာလေး နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ သီချင်းလေး တွေပါပဲ။အခွေတစ်ခွေလုံးအထိကို ပြီးသွားဖို့အတွက်ကို. . .
မြန်မာပြည်မှာက အပြင်သွားရင်တစ် ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို တွေ့ရင် သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က နှုတ်ဆက်လိုက် ရင် သူတို့ကပြန်ပြီး ရယ်ပြတယ် ပြုံး ပြတယ် ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်. . .
နိုင်ငံတကာအထိကို မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွေသွားဖို့ လုပ်ကြ တော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလို ကြိုးစား အားထုတ်မှရမယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ လုပ်ပြီဆိုရင် မိတ်ကပ်တွေ၊ အ၀တ် အစား ဒီဇိုင်းတွေက အစပေါ့ စနစ် တကျပြင်ဆင်ကြရမယ်။ ရုပ်ရှင်တစ် ကားကို သုံးလ လေးလနဲ့…
အန်ကယ်ရဲ့ ဂီတသက်တမ်းကကွယ်၊ အနှစ် ၅၀ တော့ ပြည့်နေပြီ။ အနှစ် ၅၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ One Man Show လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါ တယ်. . .
ဒီဝတ္တုကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ငါ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဘာကြောင့် ရိုက်သင့်လဲဆိုတဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်က ခက်ခဲမယ်။ ပင်ပန်းမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တအားကောင်းတယ်။ ဒီလို အချိန်တွေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့. . .
နိုင်ငံတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ယဉ်ကျေးမှုတက္က သိုလ် အနုပညာဦးစီးဌာနက သဘင်ပညာရပ်နဲ့ ကျောင်းဆင်းတဲ့ ကလေးတွေကို သဘင်လုပ်သား ရှားပါးမှုအတွက်အထောက်အပံ့ အကူအညီများပေးနိုင်ဖို့ တောင်းဆိုကြမလား ဒါမှမဟုတ်. . .
နာမည်လေးက ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဒီဇာတ်ညွှန်းဖတ်နေတဲ့အချိန် မှာဆိုရင် ညဘက်မဖတ်ရဲဘူး။ ကြောက်လို့။ နာမည်လည်း စီးတယ် ဆိုတော့ လေ. . .
အနုပညာအင်အားကတော့ မကျစေရပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆက် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ မကျခဲ့လို့လည်း ပရိသတ်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို အားပေးတာပေါ့လေ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့လည်း ငွေရှိလို့ထလုပ်တာမျိုးမဟုတ် ပါဘူး. . .
လူငယ်တွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လူငယ်တွေ ကောင်းလာတာနဲ့အမျှ သူတို့လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လုပ်တဲ့လမ်း ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းလာတယ်။ တိုးတက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် လူ ငယ်တွေကို. . .